Semalt: Indlela yokuqeda indlela yeBot kwi-Google Analytics
Uye waphawula ukuba inani lebhobho eliphazamisa isayithi lakho landa ngokukhawuleza? Ukuba impendulo yakho ngu "ewe," uMax Bell, uMphathi wePhumela loMthengi we-8 (Semalt , uya kukunceda ukujamelana nale ngxaki! Njengeyiphi iqonga lewebhu, i-Google Analytics ayinamandla okugaxekile kunye nomsebenzi webhodi, ochaphazelayo yonke indawo. Enyanisweni, yinkinga ephendukela kwintloko yangempela yabathengisi be-intanethi.
Yintoni i-Bot Traffic?
Kwi-Google Analytics, igama elithi "umsebenzi webhokisi" lisetyenziselwa ukuchaza isayithi phantsi kokuhlaselwa kwebhobhu kunye neerobhothi ezinobungozi - pavimenti antitrauma esterno. Umsebenzi onjalo wezinto ezinobungozi kwiwebhusayithi, unokunciphisa kakhulu ukusebenza kwayo yonke kwaye ifuthe umxholo wayo.
Indlela yokuhlukanisa umsebenzi weBot kwiGoogle Analytics?
Nantsi iminyathelo yesinyathelo nesinyathelo ukufumana umsebenzi we-bot kwi-Google Analytics:
Cofa kwi-Acquisition efakwe kwicandelo lesandla sobunxele, ngelo nqaku nqakraza iziteshi kunye Nonke I-Traffic. Emva koko uye kwinqanaba leCandelo leSeshingi eliSigxina lombiko uze uqakraze ukudluliselwa.
Ngaba uyazi uninzi lwemithombo yakho yokuthumela? Ukuba impendulo yakho ayikho, kwaye ayibonakali ebalulekileyo kumsebenzi wakho, oku kungaba yinxalenye ephambili yolwazi ukubonisa ukuba le ntengiso yebhotile..Ngezantsi kwekhasi qhafaza "bonisa imigqa" ukuze ufumane indawo epheleleyo yokudluliselwa.
Ufanele ulandelele ugaxekile wakho emva kweendlela ezichazwe kwimigaqo apha ngasentla, kodwa ukwenzela ukuba ube nolwazi oluninzi lwabadlali abaqhakazileyo, siye sahlanganisela ambalwa amacala kuwe:
Ungayigcina njani umsebenzi weBot kwiGoogle Analytics?
Kude iGoogle ikulungise le ngxaki, kukho iindlela ezimbalwa ongayicinga ngazo.
Enye yezona ndlela ezifanelekileyo zokujamelana nombandela ochazwe kukudala iziteshi eziyeke udidi lwebhodi okanye i-bots ezichaphazela kakhulu idatha yakho.
Yenza i-rundown yenani elikhulu kunye needesi-subinoma ezilandelayo kwi-Google Analytics.
Enye indlela ongayenzayo ukufaka yonke into kwiifayile ze-Excel kwaye ufumane ulwazi olufunayo.
Uhlobo lokugqibela kodwa olungenanto luyiyo ukuqinisekisa ukuqinisekisa ukuba i-traffic bot ayiphethisi ulwazi lwakho lwe-Google analytics. Ukongeza iziteshi yindlela efanelekileyo yokuyiqhuba. Mane ulandele ezi ngcebiso, kwaye awuyi kuphinda ubhekane neengxaki ezichazwe ngasentla!